” စိန်နားကပ်ရောင်နဲ့ပါးပြောင်ကြသူများ “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ” စိန်နားကပ်ရောင်နဲ့ပါးပြောင်ကြသူများ “
” စိန်နားကပ်ရောင်နဲ့ပါးပြောင်ကြသူများ “
Posted by ခင်ခ on Jul 12, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 19 comments
မနေ့ကရုံးပိတ်တာနဲ့ ခြံထဲထိုင်နေရင်း လက်ပွေ့ရောင်းဂျာနယ်သမားတစ်ယောက်ဖြတ်သွားတာနဲ့ အပတ်စဉ် ထုတ်ဂျာနယ်တစ်စောင်ကိုဝယ်ပြီးဖတ်လိုက်တော့ လတ်တလော သာသနာရေးဝန်ကြီးကို တရားစွဲလို့ ဖမ်းဆီး တဲ့အခါ သူ၏ကိုယ်ရေးအရာရှိ (PA – Personal Assistant)ကိုလည်း ခေါ်ယူသွားသမို့ ထိုPA ၏ ဇနီးသည်က သူ့ခင်ပွန်းကိုဘာကြောင့်ခေါ်သွားမှန်းမသိဘူးဆိုပြီး ၀မ်းနည်းစကားဆိုတဲ့အကြောင်း ဖတ်ရတော့ ခင်ခ တွေးမိ တွေးရာတွေးမိပြန်တယ်ဗျာ PA တွေအကြောင်းပြောပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရေးစနစ်က အခုလိုလက်ကိုင်ဖုန်း(ဟမ်းဖုန်း)တွေနဲ့ ပြောဖို့နေနေသာသာ ကြိုးဖုန်းတောင်မှ အိမ်ပေါက်စေ့ရှိကြတာမဟုတ်ဘူး ကြိုးဖုန်းတစ်လုံးအိမ်မှတပ်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာလည်း လွယ်တဲ့ခေတ် မဟုတ် ဘူးလေ။ အဲဒီမှာ ရန်ကုန် မြို့ထဲစာတိုက်ကြီးဘေးက ဆက်သွယ်ရေးရုံးကို ခင်ခ အိမ်မှာကြိုးဖုန်းလေး တစ်လုံး လောက်တပ်ရအောင် မန္တလေးက ခင်ခ နဲ့ဦးလေးဝမ်းကွဲတော်စပ်သည့်သူတစ်ယောက် ထိုရုံးမှာတိုင်းဂျာ အဆင့် နဲ့ရောက်နေတာမို့ ခင်ခအဖေက ” သားမြို့ထဲသွားရင်းနဲ့ မင်းရဲ့ဦးဆီကို ဒီဖုန်းလျှောက်လွှာလေးသွား ပေးလိုက်” ဆိုလို့ ထိုဖုန်းလျှောက်လွှာလေး စာအိတ်ထဲထဲ့ပြီး ထိုရုံးကိုရောက်ခဲ့တယ်လေ။ ရုံးရောက်တော့ တိုင်းဂျာ အခန်း ဘယ်မှာလဲမေးပြီး လှေကားနဲ့တက်လို့ တိုင်းဂျာအခန်းလည်းရောက်ရော ၀င်လိုက်မယ် လုပ်တော့
” ကိုယ့်လူ ဘယ်သွားမလို့လဲ”
” ဘာကိစ္စလဲ ”
” အဲဒီကိစ္စဆို ဒီကိုခဏလာအုံး ”
ဆိုပြီး အဲဒီ စတစ်ကော်လာအဖြူအင်္ကျီနဲ့သူက သူ့စားပွဲကိုခေါ်သွားတာနဲ့ အခန်းထဲမ၀င်ရသေးဘူး သူ့စားပွဲကိုလိုက်သွားရတာပေါ့။ သူက အဲဒီတိုင်းဂျာရဲ့ PA ဆိုတာ သူ့စားပွဲရောက်တော့သိရတယ်၊ ပြီးတော့ ကြိုးဖုန်းတစ်လုံးကို လွယ်လွယ်လျှောက်ချင်တိုင်းလျှောက်လို့မရတဲ့အကြောင်း အစိုးရရုံးဌာနဆိုရင်တော့ အစိုးရရုံးအချင်းမို့ ရနိုင်တယ်ဆိုရင်တောင် အချိန်ကာလတစ်ခုကြာတတ်ကြောင်း ကိုယ်ပိုင်အိမ်ဆိုရင်တော့ လျှောက်လွှာမှာဘာတွေလိုမယ် အဲဒါတွေပြည့်စုံရင်သူဆီတင်ထားခဲ့ပြီး လာလာစုံစမ်းဖို့လိုကြောင်း အကယ်လို့ မအားလပ်ရင် သူလုပ်ထားပေးဆိုလည်း ကူညီလုပ်ထားပေးမယ့်အကြောင်း ဒါပေသည့် အဲလိုကူညီလုပ်ထား ပေးဖို့ ဘာကြေးညာကြေးလေးတော့ ရှိနိုင်ကြောင်းစသည်ဖြင့်ရှင်းပြပြီး ညီလေးကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ချင်သလဲ မေးလာတော့မှ
” အကို အခုတိုင်းဂျာက ကျွန်တော်ဦးလေးဖြစ်ပြီး ခင်ခ လာတွေ့တဲ့အကြောင်းလေးဘဲ ပြောပေးပါ၊ ဘယ်လို ဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ဦးလေးနဲ့တွေ့ပြီး သူပြောတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရမှာ အဖေကသူဆီ ဖုန်း ဆက်ပြီး ပြီမို့ ဒီလျှောက်လွှာဦးဆီပေးဖို့လွှတ်လိုက်တာ” လို့ပြောတော့မှ အဲဒီသူက
” ဟာ ငါ့ညီက အတော်နောက်တာဘဲ အစထဲက ဦးလေးတော်တယ်ပြောလိုက်ပြီးရောကွာ” ဆိုပြီး တိုင်းဂျာအခန်းထဲလိုက်ပို့ပေးတယ်လေ။
အဲဒီလို PA တွေက အထက်အရာရှိကတော်တော် သူတို့က ပိုပြီးအာဏာပြချင် နေရာရချင်ကြတာလေ။
အလုပ်ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိလို့ ၀န်ကြီးရုံးတစ်ခုကိုသွားပြီး ၀န်ကြီးနဲ့တွေ့ဖို့ကို PA နဲ့အရင်တွေ့ပြီး ကိုယ့် Case File လေးတင်ခဲ့ရတယ် ၀န်ကြီးနဲ့ တစ်ခါတည်းမတွေ့ရသေးဘူး ဟိုနေ့ပြန်လာခဲ့ပါဆိုလို့ ချိန်းတဲ့ရက် အတိုင်း သွား ပေမယ့်လည်း အခေါက်ခေါက်အခါခါသွားခဲ့ရပြီး တစ်ခေါက်ကျတော့ လက်ထဲမှ ဒဘလယ်ဘလက် ပုလင်းကြီး (၂)လုံးလောက်ဆွဲသွားပြီး အဲဒီ PA ကို ဟိုပြောဒီပြောပေးထားခဲ့တော့မှ မနက်ဖြန်မနက် ၀န်ကြီးနဲ့ လာတွေ့ပါ သူတွေ့လို့ရအောင် အဆင်ပြေအောင်ပြောထားပေးမယ်တဲ့ ကဲကြည့် ၀န်ကြီးထက်တောင် တံခါးမှုး PA က ပို အစွမ်းပြနေတယ်လေ။
အစိုးရရုံးဌာနတွေဆိုတာကလည်း မဆက်ဆံချင်ဘူးနေပေမယ့် အရှင်းတော့မရဘူးလေ တစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့ ကိစ္စတစ်ခုခုနဲ့ ဆက်ဆံကြရတာဆိုလေတော့ အဲဒီရုံးဌာနတွေက PA တွေကလည်း သူထက်သူလက်စောင်း ထက်ကြောင်းပြချင်ကြတဲ့ စိန်နားကပ်ရောင်နဲ့ပါးပြောင်ကြသူများ ဆိုတာကတော့ ကြုံဖူးသူတိုင်းသိကြလိမ့်မယ် ထင်မိပါရဲ့ဗျာ။
အဲ့လိုလူတွေ.. စိန်နားကပ်ရောင် ပျောက်တဲ့အခါ…
ပါးမှောင် သွားလိမ့်မယ်… ။
သများ ပါးက တော့ စိန်နားကပ်ကို မှိန်သွားစေနိုင်တယ်။
ဆင်ဖြူတော် မရှိတော့ရင် ကြံစုပ်တဲ့ သူတွေပါ လျှော့သွားမှာပဲ။
ပိတ်သတ်ကျီးခမြား.. အသဲကောင်းလို့ ပွဲတောင်းဒဲ့ ရွှေမန်းလက်ဝှေ့ဂျော် ကခင်ခရဲ့ ပင့်တံတောင် ဖြစ်ပါသယ်၊ ဗေထိဗေထိ ဗေပုံထိ..
ရွှေကျေးကတော်တော်မယ်ဘော်ကကဲကဲတွေပေါ့ ကိုခင်ခရယ်။ အထက်လူကြီးတွေမသိလိုက်ပဲ အောက်ခြေကလူတွေချဲ့တာနဲ့ ဌာနတခုလုံးနာမည်ပျက်ကောဆိုတာမျိုးပေါ့။
ဒါကြောင့်လဲ အထက်လူကြီး ပြသနာတက်ရင်တော့ PA တွေ အရင်ဆုံး ပါသွားကြတာပေါ့ ကိုခင်ခရယ်…။
အမှန်ဘဲ ဦးပါရေ PA ကို ခေါ်စစ်ရင် အတော်များများသိရမယ်လို့ စစ်ကြောရေးက ထင်မှတ်ထားတာလေ ခေတ်အဆက်ဆက်ပါဘဲဗျာ။
PA ဆိုတာရဲ့ အဓိကအလုပ်က သူ့လူကြီးကို ရှာကျွေးနေရတာပဲဗျ…. :p:
PA တွေဟာ သူ့လူကြီးကို ရှာကျွေးတာဆိုတာ လက်ခံပါတယ်ဗျာ။ သူ့လူကြီးကိုရှာကျွေး ဝေစားမျှစား စားခဲ့ပြီးမှ အပြစ်တစ်ခုခုဖြစ်တော့လည်း ပြန်လည်ဝေစားမျှစား ဖြစ်ကြရတာလည်း မဆန်းသလိုပါဘဲ ကိုကြီးမိုက်ရေ။
အာ့လေ ဟိုပေါ့နော် ဒဂျီးနဲ့ မော့မော့တစ်သိုက်ကိုပေါဒါမြန်းလား… ဟယ် နာထင်တာ ဘယ်ဒုံးက မှန်ဖူးလို့လဲ၊
ဒါနဲ့ ငြိမ်ခံနေဂျမှာလားလို့ ကြန်ပေါဂျအူးလေ
ဒါမျိုးတော့ နာ တို့က မခံနိုင်ဝူးးး
အာ့ကျောဒါလေ နာတို့က ပတ်တနာဆို ဝေးဝေးရှောင်တယ် ပေါဝူး၊ သိအောင်သာရေးပြဒါ
ဟီးးး အချင်းချင်းတွေပဲဟာ ဘယ်ကောင်းမလဲ ဒါမိုး ဘယ်တော့မှ ၀င်မကြောဝူး ဒဂျီးနဲ့မော့မော့ဒွေ ဒေါင်းဥကြီးရာ ဂဇက်ပါ တို့ ဘာတို့… နာလဲ သိပ်မသိပါဝူးအေ
မျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါကြေးဆို နာ့ ပန်းကန်ထဲမှာပဲ ဟင်းတွေ ပုံနေသင့်တယ်။
(နာ့ မက်နှာ ဘယ်လောက်ကြီးလည်း နိ အသိဆုံးပဲလေ စိန်နားကပ်တောင် ဝတ်မရဝူးးး)
ဟိုဒင်းက ပြောချင် ဒီလူက ဆိုချင်နဲ့ နေစရာတောင်မချိဝူးးး
တဂျီးနဲ့ မော့တွေကို လုပ်ကြံကြမားးးး?
ဂလောက်မှ မကျေနပ်ချင်စရာ တွေ။
ဒီနေရာမှာလည်းနော်အားအားရှိသဂျီးဆိုတဲ့Kaiနဲ့ မော့မော့ဆိုတဲ့လူတွေကိုပဲ တိုက်ခိုက်နေကြသလိုပဲနော်။အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် အခုတလောအဲဒီမေ့ာမော့တွေကိုတော်တော်လေးတိုက်ခိုက်နေတာတွေ့နေရလို့။ထင်တာဝင်ပြောတာပါချင့်။ဒီပို့ထဲကအကြောင်းအရာကတော့အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးထင်ပါရဲ့ချင်။
ရွာဝင်သက်က ရက်ပိုင်းဆိုပေမယ့် သဂျီးတို့မောစ့်တို့အကြောင်းအတော်သိထားပုံ မန့်တာဆိုတော့ စန်းစန်းတင့် ရမ်းရမ်းကစ် တော့မဟုတ်တန်ဘူးလို့ထင်။
စန်းစန်းတင့်က အနော်မဟုတ်ဖူးဗျ… နာမယ်ပုန်းတွေ ၀ါသနာမပါဝူး စပြီးမန်ဘာဝင်ထဲက နာမည်မပြောင်းဘူးသလို နာမည်လဲ မခွဲဖူးဘူး
တကယ်တော့ဗျာ PA တွေ ခမျာလည်း အဘကြီးက မတွေ့ချင်တဲ့သူကို အခန်းထဲပေးဝင်မိရင်…
ဗျူရိုကရက်စံနစ်ကအရိုးစွဲနေလို့ ပိုးစိုးပက်စက် အဆဲခံရတာ ခင်ဗျ …
ဒီတော့လည်း ဘောင်းတော်ညိတ် စိတ်တော်သိ အကင်းလေးတော့ ပါးရတာပေါ့ …
မင်းခယောက်ျား ကမ်းနားသစ်ပင် အဘကြီးကွိုင်ရင် သူလည်း အမှုတွဲထဲပါရော… မချောင်
ဘဘကြီးတို့ PA တစ်ချို့ကတော့ Personal Assistant ထက် Family Assistant လို့တောင်ပြောရမလိုပါဘဲ ကိုကျောက်ရေ မြင်ရတွေ့ခဲ့တာတွေကလေ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကောင်းစားတဲ့ ဘဘကြီးနဲ့တွေတဲ့ PA တွေကတော့ ပျော်လို့မော်လို့ပေါ့ဗျာ
သများလဲ ပီ​ကေ တစ်​ဗူး​လောက်​အဲ့ ပီ​အေ တစ်​​ယောက်​​လောက်​လိုချင်​လို့ ရုပ်​​ချော အတိုအပြတ်​ ​နေ့တိုင်းဝတ်​ ပြီး အခမဲ့ လုပ်​​ပေးချင်​တဲ့ သူ​လေးများ မရှိဘူးလား စန်းစန်းတင့်​တို့ရဲ့